काठमाडौँ । जाडोयाममा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । चिसोमा आरएनए भाइरस वृद्घि हुन सक्ने भएकाले नियमित रूपमा सही तरिकाले मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी र हातको
काठमाडौँ । कोरोना परीक्षण गराउनेमध्ये धेरै प्रतिशतमा संक्रमण देखिनुले अझै धेरै संक्रमित छुटेको हुन सक्ने दाबी विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूको छ । नेपालमा कुल परीक्षण गराएकामध्ये २० प्रतिशत हाराहारीमा संक्रमण
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्ने ४ वटा प्रयोगशालालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ ।परीक्षण नमुना तोकिएका समयमा भण्डारण नगरेका कारण स्पष्टिकरण सोधिएको बताइएको छ
काठमाण्डौ । वायु प्रदूषण बढी भएको ठाउँमा बस्ने मानिसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र सङक्रमणका कारण मृत्युको सम्भावना बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विज्ञहरुका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट
काठमाडौँ । अरू मुलुकले बनाएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । आपत्कालीन औषधि र खोप प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले सिफारिस गरेको औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश
कोरोनाविरुद्धको खोपमा ठूलो सफलता, ९५ प्रतिशत सुरक्षित रहेको दाबी
हाजिरी कपि लिएर स्वास्थ्यकर्मि बेपत्ता, करार कर्मचारीको भरमा स्वास्थ्य चौकी
कति सुरक्षित छ फाइजरले बनाएको कोरोना विरूद्धको खोप ?
एजेन्सी । औषधि निर्माता कम्पनी फाइजर तथा बायोएनटेकले बनाएको कोरोना विरूद्धको खोप ९० प्रतिशत मानिसमा संक्रमण रोक्न सुरक्षित भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीले यस सफलतालाई विज्ञान र मानवताका
होम आइसोलेसनमा बसेकाले आफूखुसी औषधि नखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ । होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई आफूखुसी औषधि सेवन नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर